Shirka sanadkan ayaa looga hadlay arimo badan oo ay ka mid yihiin sidii loo hormarin lahaa dacwada iyo dadaalka ay wadaan maraakista Islaamiga ah ee Soomaaliyeed, iyo sidii ummada Soomaaliyeed ee qurbaha joogta loogu dhiiri galin lahaa sidii ay diintooda ugu dhaqmi lahaayeen iyo arrimo kale oo badan oo khuseeya jaaliyada Soomaaliyeed ee Maraykanka. Gabagabodii shirka ayaa waxaa ka soo baxay qodobadan hoos ku xusan;
2. Waxaan ugu baaqaynaa in ummadda Somaaliyeed qabsadaan Kitaabka Allah iyo
Sunnaha nabiga(scw) ayna dhaqan geliyaan Shareecada Islaamka.
7. Goluhu wuxuu ugu baaqayaa ummada Soomaaliyeed meel ay joogaanba inay joojiyaan iskhilaafka iyo isu tanaasulid la’aanta dhexdoodda ah, khilaafkaas oo ummada
Soomaaliyeed u keenay faragelinta shisheeye ee sii kordhaysa iyo xagjirnimada aafaysay geyiga Soomaaliyeed sidaas darteedna waxaa lagama maarmaan ah in umadu ka xorowdo khilaafka dhexdeeda ah.
8. Goluhu wuxuu ugu baaqayaa Xukuumad iyo Shacabba in amniga waddanka la xoojiyo oo ciidan xoog leh oo Qaran waddanka loo dhiso, si looga maarmo ciidamaada shisheeye ee waddanka ku sii baahaya, waxaan kaloo ku baaqaynaa in la ilaaliyo khayraadka waddanka cir, barri iyo baddba, oo aan laga gelin heshiisyo aan ku salaysnayn doonidda
12. Umada soomaaliyeed waxaan ku baraarujinaynaa inay ka waantoobaan dhibaatada qabyaalada iyo kooxaysiga ayna waajib tahay in isku meel looga soo wada jeesto cidii ummada ku kala qeybinaysa arrimahaas.
13. Goluhu wuxuu ugu yeerayaa dhamaan ummada Soomaaliyeed ee qurbaha iyo dadka wax haysta in loo gurmado dadka ku dhibaataysan abaaraha ka jira wadankii layskana kaalmaysto sidii loo taageeri lahaa.